ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ငါးများများ စားသုံးခြင်းဖြင့် မွေးလာတဲ့ ရင်သွေးလေး ဉာဏ်ကောင်း ထက်မြက်စေပါတယ်…. - ZeeKwat
Home » Gallery » Health » ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ငါးများများ စားသုံးခြင်းဖြင့် မွေးလာတဲ့ ရင်သွေးလေး ဉာဏ်ကောင်း ထက်မြက်စေပါတယ်….
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ ငါးများများ စားသုံးခြင်းဖြင့် မွေးလာတဲ့ ရင်သွေးလေး ဉာဏ်ကောင်း ထက်မြက်စေပါတယ်….
ငါးဟင်းကြိုက်တဲ့ မေမေတို့အတွက် သတင်းကောင်းလေးပေါ့။ ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာ သန္ဓေသားလေးရဲ့ အမြင်အာရုံနဲ့ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးကျန်းမာဖို့အတွက် ငါးကရရှိတဲ့ အဆီဓာတ် လိုအပ်ပါသတဲ့။ သုတေသန အဖွဲ့တွေက မိခင်ရဲ့အစားအစာနဲ့ သွေးတွင်းက အဆီဓာတ်ပမာဏရယ်၊ ကလေး ၁ လသားမှာ သွေးတွင်းအဆီအာဟာရ ပမာဏရယ်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြပါတယ်။
အဲဒီအခါ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလမှာ ငါး လုံလုံလောက်လောက် စားသုံးပေးသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေမှာ သန္ဓေသားလေးရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အမြင်အာရုံဟာ သွက်လက်မြန်ဆန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ငါးကရတဲ့ အဆီဓာတ်အာဟာရဟာ မျက်လုံးနဲ့ ဦးနှောက်ကြီးထွားဖို့ လိုအပ်သလို အာရုံကြောတွေ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့လည်း အထူးလိုအပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိခင် ၅၆ ယောက်နဲ့ ကလေးတွေကို စမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေးတွေနဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ ငါးကရတဲ့ အဆီအာဟာရဓာတ်ဟာ အလွန်အသုံးကျတာကို ကောက်ချက်ဆွဲနိုင်ခဲ့တာပါ။ တစ်ပတ်ကို သုံးကြိမ်ထက်ပိုပြီး ငါးစားသုံးသူမိခင်တွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင် နောက်ဆုံးပတ်တွေမှာ ငါးစားပေးသူ ကိုယ်ဝန်ဆောင်လေးတွေမှာ သန်စွမ်းကျန်းမာပြီး ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး မြင့်မားတဲ့ကလေးတွေ မွေးဖွားဖို့ အလားအလာ များနေပါတယ်။
ကဲ … ငါးကြိုက်တဲ့ မေမေတို့ရော၊ငါးမကြိုက်တဲ့ မေမေတို့ရော ငါးစားသုံးပေးခြင်းဖြင့် ရင်သွေးလေးအတွက် ဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိကြပြီပေါ့နော်။
ငါးဟငြးကှိုကတြဲ့ မမတေေို့အတှကြ သတငြးကောငြးလေးပေါ့။ ကိုယဝြနရြှိစဉမြှာ သနျဓသေားလေးရဲ့ အမှငအြာရုံနဲ့ ဦးနှောကဖြှံ့ဖှိုးကနြွးမာဖို့အတှကြ ငါးကရရှိတဲ့ အဆီဓာတြ လိုအပပြါသတဲ့။ သုတသနေ အဖှဲ့တှကေ မိခငရြဲ့အစားအစာနဲ့ သှေးတှငြးက အဆီဓာတပြမာဏရယြ၊ ကလေး ၁ လသားမှာ သှေးတှငြးအဆီအာဟာရ ပမာဏရယကြို စမြးသပစြစဆြေးခဲ့ကှပါတယြ။
အဲဒီအခါ ကိုယဝြနဆြောငကြာလမှာ ငါး လုံလုံလောကလြောကြ စားသုံးပေးသူ ကိုယဝြနဆြောငတြှမှော သနျဓသေားလေးရဲ့ ဦးနှောကနြဲ့ အမှငအြာရုံဟာ သှကလြကမြှနဆြနစြှာ ဖှံ့ဖှိုးလာတာကို တှရေ့ပါတယြ။ ငါးကရတဲ့ အဆီဓာတအြာဟာရဟာ မကွလြုံးနဲ့ ဦးနှောကကြှီးထှားဖို့ လိုအပသြလို အာရုံကှောတှေ ကောငြးမှနစြှာ အလုပလြုပနြိုငဖြို့လညြး အထူးလိုအပနြတော ဖှစပြါတယြ။
မိခငြ ၅၆ ယောကနြဲ့ ကလေးတှကေို စမြးသပခြဲ့တဲ့ သုတသနေဖှစပြှီး ကိုယဝြနဆြောငလြေးတှနေဲ့ နို့တိုကမြိခငတြှမှော ငါးကရတဲ့ အဆီအာဟာရဓာတဟြာ အလှနအြသုံးကတွာကို ကောကခြကွဆြှဲနိုငခြဲ့တာပါ။ တစပြတကြို သုံးကှိမထြကပြိုပှီး ငါးစားသုံးသူမိခငတြှေ ကိုယဝြနဆြောငြ နောကဆြုံးပတတြှမှော ငါးစားပေးသူ ကိုယဝြနဆြောငလြေးတှမှော သနစြှမြးကနြွးမာပှီး ဉာဏရြညဉြာဏသြှေး မှငြ့မားတဲ့ကလေးတှေ မှေးဖှားဖို့ အလားအလာ မွားနပေါတယြ။
ကဲ … ငါးကှိုကတြဲ့ မမတေေို့ရော၊ငါးမကှိုကတြဲ့ မမတေေို့ရော ငါးစားသုံးပေးခှငြးဖှငြ့ ရငသြှေးလေးအတှကြ ဘယလြောကအြထောကအြကူဖှစတြယဆြိုတာ သိကှပှီပေါ့နြော။
Ref : Womentips